[अन्तर्वार्ता] जगन्‍नाथजीको उमेदवारीले खासै असर पर्दैन, स्वतन्त्रको हालत देखिसकेका छौँ : रेनु दाहाल
फरकधार / २० बैशाख, २०७९
भरतपुर महानगरपालिका मेयरमा दोस्रो कार्यकालका लागि उमेदवारी दिएकी नेकपा (माओवादी केन्द्र) की रेनु दाहाल यतिबेला चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त छिन् । उनी सत्ता गठबन्धनका दलबाट साझा उमेदवारको रूपमा मेयरका प्रतिस्पर्धा गर्न लागेकी हुन् । गठबन्धनबाट उम्मेदवार बने पनि कांग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेलले पनि मेयरका लागि लड्दैछन् । अन्तिमपटकसम्म पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको सल्लाह नमानेका उनी अन्ततः साझा उम्मेदवार दाहालसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । पौडेल ब्याक नभएपछि यसपालि दाहाललाई चुनाव जित्न गाह्रो भइरहेको चर्चा छ । तर, उनी भने ३० वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय चुनावमा पनि आफू निर्वाचित हुने दाबी गर्छिन् । प्रस्तुत छ तिनै मेयर प्रत्यासी दाहालसँग न्युज कारखानाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
१. चुनावको तयारी र प्रचारप्रसारका लागि घरदैलोमा हिँडिरहनुभएको छ, कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?
–जनतामा जाँदा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । जनतामा उत्साह छ । विकासका लागि रेणु दाहाल भन्‍ने छ । ठूला आयोजनालाई निरन्तरता दिन र समयमै सम्पन्‍न गर्नका लागि पनि रेणु दाहालको विकल्प छैन । उहाँबाहेक अरूले गर्न सक्दैन भन्‍ने आममहानगरबासीको बुझाइ छ । जनस्तरमा मैले सोचेको भन्दा पनि राम्रो उत्साह पाएको छु ।
२. पहिलो कार्यकालमा के गर्न सक्नुभएन र फेरि दोस्रो कार्यकालका लागि मेयरमा उमेदवारी दिनुपर्‍यो ?
नारायणी तटबन्ध भरतपुरबासीको व्यग्र प्रतिक्षाको विषय थियो । वर्षेनि बाढीका कारण हुने धनजनको क्षति हुने गर्थ्याे । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि आयोजना अगाडि बढेको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई पूरा गर्नु छ । ठूला सडक र पूर्वाधार बनेका छन् । ६ र ४ लेनका सडक बन्दै छन् । महानगरीय चक्रपथ योजना छ । यी सबै योजना पूरा गर्नुछ । नारायणी नदीलाई 'सी बिच' मोडलको रुपमा विकास गर्नुछ ।
३. प्रचण्डकी छोरी भएकैले तपाईंले धेरै अवसर पाएको भन्‍ने गर्छन् नि, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
पार्टीको जिम्मेवारी लिएर कहिले रोल्पा त कहिले भारत पुगे । यहाँ मेयरमा लड्नुअघि काठमाडौंमा पार्टीको सेक्रेटरी थिए । अहिले चितवनमा पार्टीको इन्चार्जका रुपमा छु । मेयरका रुपमा एकचोटी परीक्षण पनि भएँ । जनताका पक्षमा कति काम गर्न सकेँ छर्लङ्ग देखिएको छ । जनताका हरेक सवाल शीर ठाडो बनाएर जवाफ दिनसक्छु । यसमा मलाई गर्व छ । प्रचण्डकी छोरी भएर राष्ट्रको लागि देन मात्रै गरेको छु । आफ्नो लाभको लागि गरेको छैन ।
४. गठबन्धनकै दलमध्येको कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षबाट जगन्‍नाथ पौडेलले मेयरमा स्वतन्त्र उमेदवारी दिनुभएको छ । यसले गठबन्धनलाई कति प्रभाव पार्ला ?
–खासै प्रभाव पार्लाजस्ताे मलाई लागेको छैन । किनकी गठबन्धनका दलको साझा उमेदवारका रूपमा मेयरको आधिकारीक उमेदवार म नै हो । कांग्रेसका केन्द्रीय नेता, प्रधानमन्त्री एवं सभापतिदेखि लिएर शीर्षस्त सबै नेताले उहाँ (पौडेल) लाई फिर्ताको लागि आग्रह गर्नुभयो । पार्टीले गरेको आग्रहलाई पनि जगन्‍नाथजीले स्वीकार गर्नुभएन । उहाँले स्वतन्त्र उमेदवारी दिनुभएको छ । देशभर अन्यत्र पनि स्वतन्त्र उमेदवारी दिँदाखेरी कस्तो भयो भनेर इतिहासले पनि पुष्टि गर्छ ।
यो दूरगामी महत्वलाई बुझेर पाँच दलीय गठबन्धनको साझा दृष्टिकोणसहित देश अघि बढेको छ । उहाँले बुझ्न सक्नुभएन कि भन्‍ने ठान्छु । उहाँलाई पार्टी (कांग्रेस) ले कारबाही गरिसकेको पनि छ । उहाँ कांग्रेसको आधिकारीक उमेदवार होइन । स्वतन्त्र उमेदवार हुनुहुन्छ । स्वतन्त्र हुँदै गर्दा त्यतिधेरै असर गर्छजस्ताे लागेको छैन ।
५. गठबन्धन दलविरुद्ध एमाले र राप्रपाबीच पनि तालमेल भएको छ । तपाईंलाई भारी पर्ला नि ?
–एमाले र राप्रपा तालमेल प्राकृतिक छैन । अप्राकृतिक खालको छ । एउटा वाम पार्टी र गैरवाम पार्टी, त्यो पनि गणतन्त्र र परिवर्तन विरोधि । धर्मनिरपेक्षको विरोधि र हिन्दु राष्ट्रवादी शक्तिसँग एमालेले तालमेल गरेको छ । त्यसले गर्दाखेरी उहाँको हिजोका गतिविधिले गर्दा पनि । सम्मानित संसद दुई-दुई चोटी विघटन गर्ने र संसदको गला रेट्ने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभयो । हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि खोस्‍ने काम केपी ओलीबाट भयो । एकलौटी र निरकुंश ढंगबाट उहाँ अघि बढ्नुभयो ।
६. सडक मात्रै कालोपत्रे गरेर विकास भएको भन्‍न नमिल्ने कुरा आइएका छन् नि । तपाईं यसमा के भन्नुहुन्छ ?
–भरतपुर महानगरमा सडक कालोपत्रे मात्रै भयो र ? पाँच वर्षमा भरतपुर महानगरको बजेट कति र हाम्रो सक्रिय पहलमा संघीय र प्रदेश सरकारबाट कति आयो भन्ने कुरा हामीले घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दै छौँ । थुप्रै आयोजना अघि बढेका छन् । सडकमा उल्लखनीय प्रगति छ । पाँच वर्षमा ६२२ किमी सडक पिच भएको छ ।
प्रकाशित मिति : बैशाख २०, २०७९ मंगलबार ९:५२:१०, अन्तिम अपडेट : बैशाख २०, २०७९ मंगलबार ९:५५:१२